इटाली गरेको नाटकीय coastlines पालना कि रेल मार्गहरू सबैभन्दा रमाइलो हुन्. को Cinque Terre रेलवे नाटकीय शैलीमा यस क्षेत्रका पाँच इटालियन रिभिएरा गाउँहरूमा सेवा गर्दछ. मनोरम Windows पछि आराम र सुन्दर हिमालहरू अप भिजेको, को फिरोजा समुद्र, bucolic दाखबारी, र जैतून को बगैंचाहरु. छोटो तर सुन्दर सुरम्य यात्रा लागि Levanto र लास्पेजीया बीच एक रेल लिन. एक पटक तपाईं पुग्नुभएको छ आफ्नो गन्तव्य, त्यसपछि तपाईं खर्च गर्न सक्छन् दिन पैदल यात्रा अद्भुत गाउँ.
Cinque Terre Italy द्वारा साझा गरिएको पोष्ट (@cinqueterre_love)
नेपल्स देखि सोरेंटो र यात्रा Herculaneum र Pompeii को पुरातात्त्विक स्थल पास. यो शानदार यात्रा को दृश्यहरु प्रदान गर्दछ माउन्ट VESUVIUS र नेपल्सको खाडी बाटोमा. यो रेल सवारी पक्कै पनि एक हो इटाली सबैभन्दा सुंदर रेल यात्राको.
E द्वारा साझा गरिएको पोष्ट. Emancipato फोटोग्राफी © (@ edoardo.emancipato)
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-most-scenic-train-journeys-in-italy-save-a-train-blog%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)